अस्पतालको डेढ बिगाह जग्गा गायब ! -::DainikPatra
अस्पतालको डेढ बिगाह जग्गा गायब !
बटौली  । १ सय वर्ष पुरानो बुटवलको लुम्बिनी अञ्चल अस्पताललाई गुरुयोजना अनुसार पूर्वाधारको विकास गर्न जग्गा अभाव भएको छ । उपक्षेत्रीय अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको अस्पताललाई ३ सय बेडको सुविधा सम्पन्न बनाउनका लागि अस्पतालले गुरुयोजना अगाडि सारेको थियो ।
उपक्षेत्रीय अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको लुम्बिनी अञ्चल अस्पताललाई ३ सय बेडको सुविधायुक्त बनाउन जग्गा अभाव भएको हो ।
गुमेको जग्गा खोज्न र नयाँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गुरुयोजना अनुसार पूर्वाधार निर्माणमा समस्या परेको अस्पतालले बताएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डन डा. कृष्ण प्रसाद खनालले अस्पतालको स्तरबृद्धिका लागि जग्गा नहुँदा समस्या भएको बताए । “गुरुयोजना अनुसारबाहेक पनि पूर्वाधार विकास गर्न ग्राहो छ, जग्गा हराएकै हो” उनले भने ।
अस्पतालको जग्गा हराउँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या परेको उनको भनाइ छ । अस्पतालले जग्गा खोजिदिन माघ २५ गते नापी कार्यालय बुटवललाई पत्र काटेको छ । जग्गाधनी लालपुर्जामा भएको जग्गा हराएको भन्दै खोजी गरिदिन अस्पतालले नापी कार्यालयलाई पत्र काटेको हो । २०५१ को धनीपुर्जामा अस्पतालको जग्गा ८ बिगाह ४ कट्ठा साढे ९ धुर कायम छ ।
नापी कार्यालयले भने अस्पतालका नाममा जम्मा ६ बिगाह ७ कट्ठा साढे १२ धुर मात्र देखाएको छ । बुटवलको केन्द्र भागमा रहेको झन्डै डेढ बिगाह जग्गा गायब छ । अस्पतालका सिभिल सब–इन्जिनियर सुनिल खत्रीले अस्पतालको जग्गा हराएकाले नापी कार्यालयलाई जग्गा खोजिदिन पत्र काटेको बताए । गुरुयोजना अनुसार पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न अप्ठयारो परेकाले गुमेको जग्गा पत्ता लगाइदिन पत्र काटिएको उनले बताए । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको अस्पताल मुख्य राजमार्गकै कारण जग्गा गायब भएको छ ।
त्यससँगै भर्खर मात्र पुरानो बसपार्कदेखि योगिकुटीसम्म भित्री सडक ८२ फुट कायम गर्ने भनि रेखाकंन गर्दा अस्पतालको जग्गा १४ फुटसमेत जानेछ । “अहिले करिब डेढ विगाह जग्गा हराएको छ, भित्री सडक बनाउँदा थप जग्गा जाने देखिएको छ”–खत्रीले भने । अहिले अस्पतालमा दैनिक हजार बिरामी आउन थालेपछि अस्पताल साँघुरो बन्दै गइरहेको छ ।
प्रदेशको राजधानीसमेत बुटवल भइसकेकाले अहिलेको स्थितिमा बिरामी थेग्न अस्पतालले पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ६ बेडबाट सुरु भएको अस्पतालले २०१६ मा निर्माण गरेको भवनमा जोखिमपूर्ण उपचार गरिरहेको छ ।
शवगृह पछाडिको त्यस आसपासका बासिन्दाले मिचेर घर बनाउँदै र सडक सञ्जाल बढ्दै जाँदा जग्गा घट्दै गएको अस्पताल विकास समिति बताउँछ ।
जग्गा अतिक्रमण हुँदै गएपनि सोधखोज र संरक्षणमा चासो नदिँदा निरन्तर अतिक्रमणमा परेको छ । राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त हुने अस्पताल विकास समिति र मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट छोटो समय अस्पतालमा हुने र परिवर्तन हुने भएकाले विकास समितिमा आएकाले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा अस्पतालको विकासमा ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् ।
जानकारका अनुसार २०३६ मा अस्पतालका लागि झन्डै १२ बिगाहा जग्गा छुट्याइएको थियो । अस्पताल अगाडि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तार र पछाडि कालिकापथ सडक विस्तारले केही जग्गा लिएको थियो ।
यसपछि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले अस्पतालको हालको भवनभन्दा उत्तर–पश्चिमको केही जग्गा सुकुम्बासीलाई बाँडेको थियो । ती जग्गामा अहिले ठूल्ठूला व्यवसायिक भवन बनिसकेका छन् । अस्पताल प्रशासनले विवरण गलत भएको भन्दै पुरानो जग्गामा आफ्नो स्वामित्व हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । जग्गा अभावकै कारण कमजोर भवनको तलामाथि गत वर्ष ३१ बेडको प्रसूति कक्ष बनाइएको छ ।